OIML Factory - Mpanamboatra OIML China, mpamatsy
Adidy mavesatra CAST-IRON M1 milanja 100kg ka hatramin'ny 5000 kg (endrika mahitsizoro)
Ny lanjan'ny mavesatra OIML F2 Rectangular endrika, vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy ary vy vita amin'ny chrome
Ny lanja mavesatra mahitsizoro Jiajia dia natao mba hiantohana ny fomba fiasa miasa azo antoka sy mahomby, mahatonga azy ireo ho vahaolana mety indrindra amin'ny fomba fanadiovana miverimberina. Ny lanjany dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra OIML-R111 ho an'ny fitaovana, ny toetoetran'ny toetr'andro, ny hakitroky ary ny magnetisma, ireo lanjany ireo no safidy mety indrindra ho an'ny laboratoara fenitra fandrefesana sy ny Ivotoeram-pirenena.
Famatsiam-bola manary lanja mahitsizoro OIML F2 endrika mahitsizoro, vy tsy voadio
Ny lanjan'ny boribory dia mamela ny fametahana azo antoka ary misy ny isa mitentina 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg ary 20 kg, manome fahafaham-po ny lesoka FIM OIML f1 azo ekena indrindra. Ireo lanja voadio ireo dia manome antoka ny fitoniana mafy mandritra ny androm-piainany iray manontolo. Ireo lanja ireo dia vahaolana mety indrindra amin'ny fampiharana fanasan-damba sy fampiasana efitrano madio amin'ny indostria rehetra.
Ny lanjan'ny mahitsizoro OIML M1 Bika mahitsizoro, lavaka fanitsiana amin'ny lafiny, vy
Ny lanjan'ny vy atsimo dia amboarina mifanaraka amin'ny tolo-kevitra iraisam-pirenena OIML R111 momba ny fitaovana, ny fahamendrehana amin'ny tany, ny hakitroky ary ny magnetisma. Ny fonosana misy singa roa dia manome antoka ny faritra malama tsy misy triatra, lavaka ary sisiny maranitra. Ny lanja tsirairay dia misy lavaka manitsy.
Ny lanjan'ny mahitsizoro OIML M1 Volavola mahitsizoro, lavaka manitsy ambony, vy vy
Ny lanjan'ny boribory OIML M1 Bika mahitsizoro, vy tsy misy fangarony
Ny lanjan'ny boribory OIML F2 Bika mahitsizoro, vy tsy misy fangarony
Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Shear Beam Load Cell, Lanja voamarina, Calibration lanjan'ny napetraka, Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Calibration Mass,